Prof. Vincent-Sosthène Fouda: "Bernard B. Dadié wuxuu ahaa kaliya Bernard B. Dadié" - TELES RELAY
ACCUEIL » International Prof. Vincent-Sosthène Fouda: "Bernard B. Dadié wuxuu ahaa kaliya Bernard B. Dadié"
Prof. Vincent-Sosthène Fouda: "Bernard B. Dadié wuxuu ahaa kaliya Bernard B. Dadié"
TELES RELAY 12 March 2019
Waqtigan xaadirka ah markaan dhirta weyn ee buugta Afrikanka ah ka lumay xoog ayaa ah in la aqoonsado inuusan haysan wax hor leh. Ma isbarbar dhigi karno cid kale. Waxay ka baxdaa sanadaha 103! Wuxuu dhex maray laba qarniyo iyadoo la eegayo muuqaal cunuga.
Si loo bixiyo cibaadada waa in la xakameeyo qofka ka baxa. Waxa ay noqon doontaa pretentious iga maxaa yeelay waxa markaa tixraacaan doonaa warkii faraha news, riwaayadaha iyo hindiga in ay noqdaan dad Classics of our suugaanta.
Bernard B Dadié ayaa qoray shaqooyin dhammaystiran oo sharaf leh oo nagu soo koobay dugsiga Faransiiska iyaga oo nagu hoggaaminaya inaan ereyada ku dhejinno hooyooyinka Afrikaanka ah. Bernard Dadié wuxuu ahaa xasilloonida Afrikawuxuu ahaa xanuunkiisa, gaaban wuxuu ahaa dhamaystiran Afrika, laakiin si lama filaan ah ayuu u furi lahaa isla Afrika si nolosha ah. Waannu qoslnay, waannu oohinay, waxaannu u maleynay inaanu qoob-ka-cayaarnay, waannu akhrinay. Maya, ma aan soo sheegi karayn sida noocyada kale ee koorasyada sheekooyinka, kuwaas oo ku jira, bogag dhowr ah, dhuuxa aadka u ah waxa ay ugu roon tahay Afrika. Haddii aan sameeyo, waxan soo jeedin lahaa in Bernard B Dadié loo dhiibay aduunka magaca Afrika!
Ha u seexdo hurdo wanaagsan oo Afrikaan ah, sidaa daraadeed waa la iibsaday, kalsooni ku qabta caafimaadka wanaagsan ee shaqada uu ka baxayo! Waxay ku noolaan doontaa, wayna noolaan doontaa.
Annagu waannu og nahay, oo waxay wada ahaan doonaan qalbiqabowjiyo iyo xiir dabayl ah. Oo wakhtigaygii, kuwa caqli ku yeesha shuqulladiisa oo keliya ayaa isaga jecel, oo jecela jacaylka weligiis ah ee jacaylka uu u qabo Afrika, ugu dambeyntii nolosha.
Qoraalka Prof. Vincent-Sosthène Fouda
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/prof-vincent-sosthene-foudabernard-b-dadie-netait-que-bernard-b-dadie-2/
Jacaylka jacaylka maalinta ugu horeysa ee maxkamadiisa oo lagu magacaabo "scam"
India: World Wide Web: Google Doodle u dabaal sano 30 World Wide Web ah | India News